William Branham aive ASIRI Mwari airatidzwa panyama, asi mutadzi akatendeuka akabapatidzwa neMweya Mutsvene
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » William Branham aive ASIRI Mwari airatidzwa panyama, asi mutadzi akatendeuka akabapatidzwa neMweya Mutsvene
William Branham aive ASIRI Mwari airatidzwa panyama, asi mutadzi akatendeuka akabapatidzwa neMweya Mutsvene
Mwari akaratidzwa panyama saJesu Kristu.
Kuti akunde kuita izvi Jesu aifanira kuzvarwa nemhandara. Paaive asvitsa makore maviri ekuberekwa vazivi vekumabvazuva vakauya kuzomunamata. Paakasvitsa makore gumi nemaviri akakatyamadza vatungamiri vezvitendero vechiJuda neruzivo rwake.
Jesu haana kubvira aita chivi. Haana kubvira anyepa. Haana kubvira akanganisa. Haaida kutendeuka kubva kune chero chinhu. Haana kubvira atadza kufunga.
Haana kubvira aroora kuti aite vana kupfurikidza kusangana pabonde.
Jesu akashambidzwa mumvura dzerwizi Jorodani nemuprofita kuratidza kuti aive zvese Gwaiana rechibairo uyezve Muprista mukuru. Hapana munhu anogona kuzadzisa mabasa maviri aya.
Akazvipa kuvavengi vake kuti vamuvuraye. Paakanga achifa, zuva rakaramba kupenya. Paakafa kwakaita kudengenyeka kwenyika kukurusa. Haana kungofa, nekuti akashandisa rufu rwake kupa hupenyu hwake hwaive husina zvivi sechibairo kuvatadzi vepasi rese. Asi haana kugara akafa kwemazuva anodarika matatu.
Akaenda kunzvimbo yevakarasika akatora makiyi erufu nehadhesi kubva kuna Satani.
Vadzidzi vake vakanyora zvaakataura pazviitiko zvinenge zvipfumbamwe. Akataura zvinhu zvishoma kwazvo. Hushumiri hwake hwaive hwenguva duku nekuti hwakavapo kwemakore matatu nehafu chete.
Akaberekerwa muchidyiro. Aive asina chiro. Akakwereta chikepe, mbongoro, imba, uye guva. Akafira pakati pembavha mbiri.
Asi karenda ratinovimba naro rinotanga nekuzvarwa kwake kunonzwisa tsitsi.
Uyu ndiye Munhu anodiwa naMwari, Mwari anogara maari pamuviri.
William Branham haaedze kana paduku kuenzaniswa nehupenyu hwakadai.
VAKOROSE 1:19 Nokuti Baba vakafara nazvo, kuti kuzara kwose kugare maari
JOHANE 3:34 Nokuti wakatumwa naMwari, ndiye unotaura mashoko aMwari; nokuti haapi Mweya achiyera.
35 Baba vanoda Mwanakomana, vakamupa zvose muruvoko rwake
Munhu Jesu chete ndiye ega ane kuzara kweMweya maari. Ane mweya wese usina kuyerwa.
Izvozvi, ndinoda kuti muzive izvi zvechokwadi, nemi makateerera kukaseti rino. Munogona kunge mafunga kuti nhasi ndanga ndichiedza kutaura izvi pamusoro pangu, nekuti ndanga ndichigadzirira Mharidzo ino. Handina chekuita nayo kukunda pasina, hapana chinokunda izwi chete. Uye, Izwi rangu, kunyange zvichipikisana nemaonero angu; ndaida kuva mutapi. Asi kuda kwababa vangu kuti ndasarudza kudaro, uye ndinofanira kudaro.
Handisini ndakaonekwa parwizi; ndaive ndakangomirawo ipapo paakaonekwa. (1933).
Handisini ndinoita zvinhu izvi uye kutaura zvichaitika sezvazviri; ndingori munhu ari pedyo paanozviita.
Ndaingove izwi raakashandisa, kuti ataure izvozvo. Zvaive zvisiri zvandaiziva; ndezvandakazviwisira kwazviri, akataura kupfurikidza ini. Handisini, aive asiri mutumwa wechinomwe, oh, kwete; kwaive kuratidzwa kweMwanakomana wemunhu. Aive asiri mutumwa, mharidzo yake; chaive chakavanzika chakaziviswa naMwari. Haasi munhu; ndiMwari. Mutumwa aive asiri Mwanakomana wemunhu; aive nhume kubva kuMwanakomana wemunhu.
Hama Branham vaive nechikamu chemweya waMwari. Haana kuzara kweMweya waMwari. Tarisisai. “ndingoriwo munhu ari pedyo paanozviita”.
Kuzara kwevuMwari kwaive kusiri maari. Kuzara kwehuMwari kwaive pedyo naye, kuchishandisa izwi rake kutaura nevanhu.
“Mutumwa wechinomwe aive asiri Mwanakomana wemunhu”.
Mweya waKristu seMwanakomana wemunhu waive wakamira pedyo nehama Branham aive mwanakomana wemunhu, ukataura uchishandisa iye. Saka Kristu akazviratidza kupfurikidza muprofita, asi kuzara kwaKristu kwaive kusiri mumuprofita asi kwaive parutivi pemuprofita.
Hama Branham aive mwanakomana wemunhu achiratidzira Mwanakomana weMunhu aive akamira asingavonekwi parutivi nehama Branham.
1 VAKORINTE 12:11 asi izvi zvose zvinoitwa noMweya iwoyu mumwe chete, unogovera mumwe nomumwe sezvaanoda.
“Kugovera” muchiGiriki ndiko kunodaidzwa kuti “meros”. Duramazwi rinoti “meros” zvinoreva kuti muzvidimbu, zvidimu mumipimo, muchikamu, sezvakafanira chidimbu, kugoverwa mumwe nemumwe.
Munhu mumwe nemumwe anowana chidimbu chakasiyana kana mupimo weMweya muchidimbu chake muhurongwa hwaMwari.
Kristu, achifamba pakati pezvigadziko zvemwenje, ndiye anobata hurongwa hwaMwari hwese kwemakore 2000 enhorondo yekereke. Hama Branham vaingove nyeredzi muruvoko rwake rwerudyi, saMartin Luther naJohn Wesley vaingove zvakare nyeredzi muruvoko rwake rwerudyi. Vaingove nebasa rekutungamirira munguva yavo. Saka vaingove nechidimbu chakakwanira kana mupimo weMweya kuitira hushumiri hwemumwe nemumwe wavo.
ZVAKAZARURWA 1:13 Napakati pezvigadziko zvemwenje, mumwe wakafanana noMwanakomana womunhu,
Jesu ari pakati penguva nomwe dzemakereke munguva yese yemakore 2 000 enhorondo yemakereke.
ZVAKAZARURWA 1:16 Muruvoko rwake rworudyi wakanga akabata nyeredzi nomwe;
Pano tinoona kupimwa pakati paJesu nehama Branham. Hama branham vangori nyeredzi muruvoko rwake rwerudyi, nyeredzi inofanira kubatwa neruvoko rwake rwerudyi.
Hama Branham vaive nechidimbu chakati kurei cheMweya kukunda chatingawane imi neni, asi chingori chindimbu chete.
Pauro wekutanga panyeredzi nomwe muruvoko rwaMwari rwerudyi, akasimudzirwa kuitwa vamwari nekuda kwesimba guru raaive naro.
MABASA 14:10 akati nenzwi guru: Mira kwazvo netsoka dzako. Iye akavhazuka, akafamba.
11 Vanhu vazhinji vakati vavona zvaitwa naPauro, vakadanidzira norurimi rwavaRikaonia, vachiti: Vamwari vaburukira kwatiri, vakaita savanhu.
Zviri kudzokororwa nhasi uno. Vanotenda kuMharidzo vanoti Mwari akauya pasi vakaita seHama Branham-- vachizviratidza muna William Branham.
13 Ipapo muPirisita waJupiteri waiva netembere yake pamberi peguta, akavuya pamasuvo nenzombe namaruva okushonga, achida kuvabayira, anavanhu vazhinji naye.
14 Zvino vaapostora, Bharnabhasi naPauro, vakati vachinzwa izozvo, vakabvarura nguvo dzavo, vakamhanyira pakati pavanhu vazhinji, vakadanidzira.
15 Vachiti: Varume, munoitireiko izvozvi? Nesu tiri vanhu semi vo; tinokuparidzirai mashoko akanaka, kuti mubve panaizvozvo zvisinamaturo, mutendevukire kunaMwari mupenyu wakaita denga napasi, negungwa, nezvose zviri mukati mazvo.
Hapana pakati pavo Puro kana William Branham aive Musiki. Saka hapana anokwanisa kuva Mwari.
Saka ari pakati pevanhu ari mupenyu nhasi. Vangani vanozvitenda? Mwari akukomborerei. Zvirokwazvo munoziva kuti ndiri kutaura, ndakamirira chimwe chinhu. Ndichakuudzai kuti chii. Munhu uyu ari pano, Mutumwa waShe. Ndiyo chaiyo, Shongwe yeMoto waShe. Ini ndakangofanana nemi, munhu, ... ndakaberekwa ndiri mutadzi, ndakaponeswa nenyasha, semi mose.
… Zvino, Huvepo Hwake huri pano. Zvino muZita raJesu Kristu Mwanakomana waMwari ndinotora mweya wese uri pano kuuisa pasi pangu.
57-0613 KUITA NYOTA YEHUPENYU
Zvino, munoti, “Muri kutsvakei hama Branham?” Ndakatarira uye kurindira kuuya kweMweya Mutsvene. Vangani vakamboona mufananidzo wawo? Ngationei maoko enyu. Chokwadi ndinofunga kuti mose makambouona. Uri pano. Shongwe yeMoto, vemifananidzo veAmerica vakatora mufananidzo wayo. Iri pasi pemutemo wekopiraiti muWashington DC, munhu mumwechete chete anoshamisa akatorwa mifananidzo yezvesainzi munhorondo yese yepasi pano. Onai paWashington kuti hachisi chokwado here. Wakaongororwa naGeoge J. Lacy, mukuru weFBI, wemafingapurinti nematsamba. Ichokwadi.
Shongwe yeMoto yaive parutivi rwake, pamusoro pake, kwete maari.
58-0503 MAMBOKADZI WESHEBA
Uri pamusoro pemukadzi uyo . Zvinoita semunokwanisa kuona chiedza chacho, chiedza cheruvara rweemaraldhi wakarembera pamukadzi uyo. Ndiwo Mweya Mutsvene uri mumucherechedzo wechiedza.
Zvino, mirai, vashoropodzi, hamufungi kuti hauzi Mweya Mutsvene here. Chii chakadana Pauro munzira achienda Damasiko?
Mweya waive pamusoro pake, kwete mukati mehama Branham.
58-0521 TARIRAI NDIMIRE PAMUKOVA NDICHIGOGODZA
Kana vachiri kukwanisa kunzwa izwi rangu, pakati pangu nemunhu panouya Chiedza. Chaive chaMwari achifamba pakati pemunhu nehama Branham.
Mweya waive pakati pehama Branham nemunhu.
59-0815 GONDO RINOTARIRA DENDERE RARO
Damasiko, akawisirwa pasi. Pauro paakatarira mudenga, kwaive nei? Shongwe yeMoto. Ndizvo here? Izwi rikabva kwairi, rikati, “Sauro, Sauro, unondiroverereiko.”
Shongwe yoMoto yakaonekwa pamusoro pemutumwa kukereke yekutanga.
59-1219 MIBVUNZO NEMHINDURO PAMUSORO PEMWEYA MUTSVENE
Ndiko kwaive kuonekwa kweMweya Mutsvene here? Semhepo, mhepo inoshamisa. Zvino vakabva vaona. Imomo maive nemarimi maduku emoto, zana nemakumi maviri awo, akatanga kugadzikana nekugara pamusoro peumwe neumwe wavo. Chaive chii? Chaive chii? Shongwe yeMoto, aive Mwari pachake achizvigovanisa pakati pevanhu vake, achiuya muvanhu. Jesu aive akatakura zvose; aive neMweya usina mupimo; isu tinouwana nemupimo (hongu muri kuona zvandinotaura?) ‘nekuti tiri vana vekuwana. Hupenyu hwake – Hupenyu hwake Husingagumi hwaiuya matiri. Zvino chii chakaitika? Vakabva vazadzwa vose nemweya mutsvene.
Mweya wakagovaniswa uye “ukagara” pamusoro pemumwe nemumwe wavo. Isu, kusanganisira hama Branham, tinowana Mweya nemupimo. Jesu ega ndiye ane ‘Mweya wacho wese’.
60-0716 KUBVA PANGUVA IYOYO
1933. Mukadzi wangu, mwedzi inenge mitanhatu yakadarika, akazviona kekutanga muhupenyu hwake. Aive parwizi zuva iroro pawakaonekwa. Chinyorwa pachakatenderera kwese kwese --- kune vanotaura chirungu pasi pano mupepanhau reAssociated Press: Chiedza chinoshamisa Chakaonekwa pamusoro peMushumiri weBaptist achibapatidza .” Wakamira pakadaro apo ... wakataura; vanhu vakanzwa uchitaura nekudairana. Zviuru zvevanhu zvakamira pakadaro apo vakanditarisa ndichibapatidza kubva kuvhuserere yangu yekutanga -- vanhu vakanga vatendeuka 500 murwizi rweOhio ... zvaive mupepanhau, zvidimbu zvemapepanhau zvatakacheka; tinazvo. Zvirimo mupepanhau reAssociated Press, Canada inazvo, kupoteredza nyika yose. “Chiedza chinoshamisa ...”
Izvozvi, vezvesainzi vanawo. Izvozvi, vakauita nguva nhatu kana ina dzakasiyana.
62-0120 MWARI VASINGASHANDUKI VACHISHANDA NENZIRA ISINGATARISIRWI
“Munoti makamirirei, Hama Branham?”
Munhu wese Muno, hatikakavari, ndakamboenda kuPhoenix nguva zhinji, ndaUona, ndichiparidza mharidzo yakaita seiyi. Asi Chiedza.
Vane mufananidzo wacho. Chero, vakawanda venyu, vakaona Chiedza. Hamuna here? Munawo pamifananidzo uye pazvinhu. Kupi, zviri muWashington D. C.
Akamirira chiedza chaizofamba pamusoro pevanhu chozivisa zvavaifunga.
62-0712 TICHAKWANISA KUONA JESU
Izvozvi, kana zvikadaro .... Ndakamirira kuzodzwa. Uye kana kukasauya, ndichaisa maoko pamukadzi, ndomunamatira, ndoenderera mberi. Handizivi. Handina chandinogona kutaura. Chiri kutora nguva yacho, kana kuti ini ndini ndichatora nguva yangu, ndakachimirira. Ndizvozvo chaizvo.
62-0122 KUZADZISWA KWEBASA
That's just all. Izvozvi, izvozvi chingobudai pachena. Munoti, “chii chamakamirira, Hama Branham?” Kuna Iye. Mukadzi uyu handimuzivi. Kana Akasandizodza, handikwanisi kuzviita. Ndizvozvo chete.
Kuzadzwa neMweya ndiwo Mweya unopinda mumunhu. Kuzodzwa ndiwo Mweya uchigara pamunhu.
II MADZIMAMBO 2:15 Zvino vanakomana vavaporofita vakanga vari paJeriko pakatarisana naye, vakati vachimuona, vakati, "Mweya waEria wogara pamusoro paErisha." Vakandosangana naye, vakakotamira pasi pamberi pake.
Kwakagara kuine rudo rukuru rwekunamata munhu aive nemweya waEria.
RUKA 3:15 Zvino vanhu vakati vachatarira, vose vachirangarira mumoyo mavo pamusoro paJohane, kuti zvimwe ndiKristu,
JOHANE 1:19 Uku ndiko kupupura kwaJohane, musi vaJudha vakatumira kwaari vaPirisita navaRevhi, vachibva Jerusarema, kundomubvunza, kuti: Iwe ndiwe aniko?
20 Akatenda pachena, haana kuramba, akatenda pachena, achiti: Handizi Kristu
Johane haana kuramba kuva kristu, zvinoreva kuti akazodzwa. Asi aive asiri Kristu.
Johane aive mwanakomana wemunhu kana muprofita, kwete Mwanakomana weMunhu.
Kutadza kuenzanisa muprofita anotiratidza zaruriro yeBhaibheri naMwari.
ZVAKAZARURWA 22:8 Ini Johane, ndini ndakanzwa, ndikavona izvozvi. Zvino ndakati ndichinzwa, nokuvona, ndikawira pasi kuti ndinamate pamberi petsoka dzomutumwa wakandiratidza izvozvi. (Hama Branham mutumwa zvakare, mutumwa wechinomwe).
9 Akati kwandiri: Rega kudaro; ndiri muranda pamwe chete newe, nehama dzako, vaporofita, navanochengeta mashoko ebhuku iyi; namata Mwari.
Johani akaita izvi kaviri. Uku ndiko kuita kukuru kwerudo rwekufananidza munhu anenge azivisa chakavanzika naMwari.
ZVAKAZARURWA 19:10 Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake, kuti ndimunamate. Akati kwandiri: Rega kudaro, nokuti ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzako dzinobata kupupura kwaJesu; namata Mwari, nokuti kupupura kwaJesu ndiwo mweya wokuporofita.
Ndapota musanyengerwa nekuita uku. Hakuna munhu angagona kuva Mwari, kana kuenzana naMwari. Mwari akaberekwa nemhandara, haana kubvira aita chivi kuti atendeuke, uye haana kugara muguva kwemazuva matatu. Hama Branham havana kutanga kana kupedza nenzira yakafanana neiyi.
NGUVA DZEMAKEREKE CHITSAUKO 7
Sekuzvifananidza kwakaita Ishe nevanhu pachimiro, ari kuzvifananidza zvakare nevanhu neMweya wake uri mukati mevanhu.
Akataura pamusoro pechimiro (chaMwari) achireva Jesu chete, kwete vamwe vanhu vose.
NGUVA DZEMAKEREKE CHITSAUKO 10
Nezvimwe zvakadaro mweya iwoyo wakaenderera uye rimwe zuva acharatidzwa muchimiro mumunhu achatungamira kanzuru yemakereke yepasi rino, sezvatanga tichitaura. Nendarama yake (rangarirai Judasi akabata nhava) achatonga nyika.
Antikristu achava nechimiro chaSatani, saJudasi.
64-0830E MIBVUNZO NEMHINDURO 4
Hama Branham, hama yechidzimai yakauya kuTabernakeri mamaira mazana masere, akati anotenda kuti maive Jesu Kristu muchimiro chemunhu. Ndapota taurai nezvazvo. Aive asingadi kana kumira kuudza vamwe zvaaifunga. Zvakanaka. Zvino, nekuti hama iyi yaikanganisa. Handisi Jesu Kristu; Ndiri muranda wake. Takataura pamusoro peizvi nguva zhinji kwazvo.
Hama Branham vaingove muranda waJesu.
60-0305 MUSATYA NDINI
... Asi Simoni mwanakomana wangu, handidi kuti ukanganwe izvi: Unofanira kuziva Messiasi kubva muMagwaro akanyorwa pamusoro pake. Usafe wakasiya Magwaro, mwanakomana wangu. NaMosesi, mutungamiri wedu, akatiudza kuti Messiasi achave akadii. Nekuti zvakanyorwa muMagwaro kuti, “Ishe Mwari wedu, achamutsa muprofita pakati pedu.’ Uye kana Messiasi uyu auya, achave Mwari muProfita. Achave akasiyana nemamwe maprofita. Achave Mwari muprofita. Asi muchamuziva, Simoni, nekuti achave muProfita uya, achaita zviratidzo zvemuprofita.’
... Ndakaziva zviratidzo zvake zvaive zvakadarika zvemuprofita, saka aive Mwari muprofita.
Mumwe nemumwe wevatumwa vanomwe aingove senyeredzi muruoko rwaJesu rwerudyi. Hapana mumwe wevatumwa ava akagona kupa vanhu zviuru zvishanu zvekudya kubva pazvidimbu zvinomwe zvechikafu ‘chemwanakomana wechikoro chemasikati’. Hapana pakati pevatumwa akafamba pamusoro pemvura. Hapana aive akaberekwa nemhandara. Hapana akamuka kubva kuvakafa mumashure memazuva matatu afa. Hapanawo akakwira kudenga mumuviri watinoona. Jesu, paakazviratidza mumutumwa, akamira parutivi pemutumwa asingaonekwe.
Hama Branham vaikwanisa kutaura zvaifungwa nevanhu, chaive chiratidzo chaMessiasi. Asi havana kukwanisa kutiudza zvakawanda pamusoro peNguva yeKutambudzika zvakaita seHwamanda kana Ndiro nomwe. Akati Kutinhira kunomwe neChisimbiso chechinomwe zvaive zvakavanzika zvakazara.
... Akabva avhura Chisimbiso chechinomwe. Asi munoona, ndicho chakavanzika chakavanzwa. Hakuna anochiziva. Asi ... zvichienderana nezvaakataura: hakuna achaziva Kuuya Kwake; havangazozivi zvakare pamusoro pechakavanzika cheKutinhira kwechinomwe uku. Saka muri kuona, zvinoyanana.
Aikwanisa kuzivisa Chisimbiso chechitanhatu sekushandurwa kwemamiriro ezvinhu panyika, asi akati vaprofita vaviri kuvaIsraeri ndivo vachazarura Chisimbiso ichi sezvo hama Branham havana kubvira varova nyika nehosha kana kunamatira nekudaidza makore matatu nehafu enzara.
Saka hushumiri hwake hwaive nesimba kwazvo, asi huri nemuganhu. Jesu anokwanisa kuita zvakawanda kukunda chero muprofita zvake.
Muprofita anokwanisa kungoita chikamu chezvinoitwa naJesu. Muprofita anoita mabasa akanangana nenguva yekereke yaari. Jesu akafamba nepakati pezvigadziko zvemwenje zvese zviri zvinomwe.
61-0611 ZVAKAZARURWA CHITSAUKO CHECHISHANU.1
Ndakanzwa nezvazvo makore mashoma akadarika ndikafunga kuti kwaive kutamba. Ndakasangana nehama dzakati kuti (vandisina wandiri kuona kana mumwechete wavo nhasi mangwanani ano), vaviri kana vatatu vavo imwe nguva parwendo rwekuenda kunoredza, vakanditanga nenyaya yekuti, “Hama Branham hamusimi here Messiasi akazodzwa, Kristu?”
Ndakaisa maoko angu pahuro dzevaviri vavo, kana, vese, ndikati, “Hama, sekuedza kukuru kwandinoita kuva muranda waKristu, handingadi kuti mutaure chinhu chakadaro. Uye kana chichizotaurwa pamusoro pangu, ipapo ndinosiya basa iri ndakachena moyo, asi imi munoita izvozvo muchadaira pamusoro pekurasika kwemweya umwe neumwe wandaizokwanisa kutendeutsa panguva iyoyo; mazviona, nekuda kwekundibvisa kwenyu pabasa.” Ndinofunga ndizvo zvakabva zvazvipedza.
Ndakazozvinzwa zvakare dzimwe nguva. Asi zvaiva zvisina kuita sekudaro. Uye rimwe zuva muCanada imwe hama yakandiratidza katikiti kaduku kechinhu chaaive arongedza muhomwe dzake, akati “William Branham ndiShe wedu, “vachibapatidza muzita raWilliam Branham. Uye chinhu chiduku ... chakanaka ... kana aive muvengi, kana aive muvengi wangu ndingadai ndakaziva kuti aitamba zvake. Asi hama yakanakisa yandinodisa yakauya kuzoreurura zvivi zvayo nezvaakakanganisa akati kutenda kwake mandiri saJesu Kristu.
Pamusoro ipapo, ivo vanhu vakanaka vandinodisa, dai vaona kukanganisa kwavo nezvavakaita, ... Kana ndaenda, vachatii? “uyo ari apo, ndizvo zvazvaive chaizvo” nekurudziro yose yandinayo pavanhu, ipapo muchaona kuti zvichazovei, ndaizova antichrist. Handikwanisi kudaro!
Ndaimira ndakadaro kana vanhu vandidaidza kuti muprofita nguva zhinji, asi kana zvasvika pakudaidzwa kuti “Kristu akazodzwa,” kana zvimwe, zvaindikurira. Ndaisakwanisa kumirira zvakadaro.
… Husiku hushoma hwakadarika, kuti zvive zvechokwadi, ndakashanyirwa naShe. Ndikaona ... a—a nyoka yaive neruvara rweyero nerutema, vachinditaurira nezvazvo, chinhu chikandirova gumbo. Asi ropa rangu raive rakanakisa hazvina chazvakaita pandiri. Ndakatarisa pasi, ndipo pandaive ndamborumwa. Ndakatendeuka nekukasika nepfuti ndikapfura chinhu ichocho, ikachirova nepakati chaipo.
Hama ikati .... ndakatendeuka nepfuti yangu kuti ndichipfure ndibvise musoro, iye akati “usadaro, chingononga muti uri pedyo newe.” pandakatendeuka kuti ndinonge chimuti, chakabva chapinda mumvura, mukadziva kaduku duku kemvura.
Ini ndakabva ndati, “Zvakanaka, hachikwanisi kukuvadza kwenguva refu izvozvi nekuti ndinotenda kuti hama yaona (hama munashe) kuti chii chaizoitika. “ndakati chaive chakuvadzwa zvakanyanya, saka chaizofa.”
Hama Branham vakaona chichinyangarika chichipinda mukadziva kemvura, zvinotaura pamusoro pedzidziso, “kusukwa mumvura dzeShoko”. Vakafungira kuti chaizofa asi havana kuona chichifa.
Yaive hama muMharidzo yakavaudza kuti vasachiuraye, saka ihama muMharidzo dzicharamba dzichidzosa dzidziso iyi nekuti haina kubvira yafa. Yakangovigwa mudzidziso dzavo, dzinobva mukadziva kemazwi akabata paitaurwa.
Iyi idzidziso ‘yekufananidza munhu naMwari’ inoramba ichidzoswa mudzidziso ‘nevanotenda Mharidzo’. Vanoti hama Branham ndiMwari muchimiro chemunhu. Idzidziso yakaipisisa. Vatumwa vanomwe pavakauya kuhama Branham kuzovapa basa rekuzivisa Zvisimbiso zvinomwe, vaive munzvimbo dzine gomo reSunset Peak (chiedza chemadeko chinouya kuzotidzosera kudzidziso dzaPauro) neRattlesnake Mesa (kunyengera kwaSatani kunoti ndiye Mwari muchimiro chemunhu). Munofanira kusarudza kuti muchatevera rutivi rwupi.
61-0611 ZVAKAZARURWA CHITSAUKO CHECHISHANU. 1
Ndine matsamba kumba, uye kuridzirwa nhare kubva kuChicago nedzimwe nzvimbo dzakasiyana, vachindibvunza kuti ndinotenda here mudzidziso iyoyo. Uye ndine ndudzi zhinji dzematsamba dzandakagamuchira mumazuva mashoma adarika, nenhare kubva kunzvimbo dzakasiyana, saka, vachiti ndiri Kristu. Hama, chinhu chakaipa chinonyangadza, chekusanamata chingori manyepo aSatani! Mazviona? Tarirai, ndiri hama yenyu. Izvozvi, izvozvo zvinokwanisa kudzinga chero munhu kubva muhushumiri. Zvinokwanisa kuita kuti chero munhu anoda Kristu atize kubva kwazviri.
... Mweya chaiwo, asi nhasi ndinovimba kuti wagamuchira ronda rakaipisisa saka uchafa nekukasika kuti ndidzokere muhushumiri.
… Uku kutadza! Ndiko kunyepa kwekuti!” ZVANZI NAJEHOVA!” Zvakaipa! Handina chekuita nazvo!” ndiri hama kwamuri.
… Mwari dai muvengi anoshanyira hama dzedu nehanzvadzi dzedu ne... dai agamuchira ronda rakaipisisa risingazorarame zvakare; dai angofa zvakadaro,
Jesu akatendeuka akati kwaari: “Kana ndikada kuti agare kusvika ndichiuya unei nazvo iwe?” Saka haana kubvira ....
Zvino kwakabva kwabuda dzidziso. Saka zvingatange zviri nyore zvakadii? Kwakabuda dzidziso yekuti -- yekuti “Johane aisazofa kusvikira achiona Jesu achiuya, kana kuti kusvika paKuuya kwake kweChipiri.” Bhaibheri rinoti kwaive nedzidziso yakabva panaizvozvo.
Zvisinei, Jesu haana kubvira azvitaura saizvozvo. Akati “kana ndikada kuti agare kusvika ndichiuya, unei nazvo iwe?”
Zvino, tinoona kuti akasimudzwa kuenda kudenga akatanga kuona kubvira ipapo kusvikira paKuuya kwaShe sekunge aivepo achiona zvese zvichiitika.
Chiratidzo chezvichauya chakafanana nekuona chiitiko chacho pachivhiti vhiti. Zvakangoda kuita sekuti waivepo.
Hama Branham pavaiona zviratidzo zveZvisimbiso zvichizarurwa munguva ichazouya Kudenga, zvaiita sekuti vaitovepo munguva ichauya.
Asi tarirai kuti vadzidzi vakashandura sei zvakataurwa naShe. Apa ndipo patinofanira kungwarira. Kana musingakwanisi kuenda paMagwaro muchibva pane mamwe Magwaro muchienda pane mamwe Magwaro, ipapo munoisa kurasisa panyaya.
MATEO 28:20 Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika.
ZVAKAZARURWA 1:13 Napakati pezvigadziko zvemwenje, mumwe wakafanana noMwanakomana womunhu, akafuka nguvo yakasvikira kutsoka, akazvisunga napachifuva nebhanire rendarama.
Kristu aive zvese nekereke yake uye mukereke yake mukati menguva nomwe dzese dzemakereke.
JOHANE 14:17 Ndiye Mweya wazvokwadi; nyika haigoni kumugamuchira, nokuti haimuvoni, kana kumuziva; imi munomuziva, nokuti ugere nemi, uchava mukati menyu.
VAKOROSE 1:27 kunaivo Mwari waakada kuvazivisa vufumi bwokubwinya kwechakavanzika ichochi pakati pavahedheni, chokuti, Kristu mukati menyu, tariro yokubwinya;
Asi muKristu mumwe nemumwe ane chidimbu cheMweya waKristu maari.
Zvino, tine Mweya nekuda kwezvipo izvi, nuzvidimbu. Asi Kristu anawo usina mupimo. Isu tinawo nemupimo. Kune mumwe wakapihwa zivo, kune umwe wakapihwa vuchenjeri.
Mune mabasa mashanu mukereke; vapostora kana mamishinari, umwe wavo, zvese chinhu chimwe, shoko rinoreva “akatumwa.” Uye vapostora, maprofita, vadzidzisi, vavhangeri uye vafundisi, Mwari akavaisa mukereke. Asi nekuti mumwe anozova mupostora, muprofita haakwanisi kutaura kuti “Hausi mazviri.” Kana kuti mufundisi kuudza izvozvo kumuvhangeri zvichienda zvakadaro. Asi vose mitsetse miduku yaMwari yakaiswa mukereke kuitira kururamisa vatsvene.
Uye mumuviri wese wepanzvimbo pane zvipo zvipfumbamwe, kuna 1 Vakorinte 12, zvipo zvemweya zvipfumbamwe mumuviri mumwechete. Zvinoshanda zvakasiyana siyana, asi zviri zveMweya mumwe.
Zvino ... Asi muna Kristu ndimo maive nokuzara kwose. Zvino, kana mukaona munhu pano achiporofita, umwe ari mufundisi, mumwe muvhangeri umwe mudzidzisi. Zvino, hamungataure kuti hamusi mazviri, nekuti angori mumwe wavo achiratidzirwa kubva kunaMwari. Zvese zvinonongedzera kuna Mwari zvakare, iye dombo guru rinokosha. Musakanganwe izvozvo.
64-0304 TICHAKWANISA KUONA JESU.
Jesu paaive panyika akataura kuti aive Mwanakomana waMwari, vakamutuka. Iye akati, “Munonditukireiko kana ndichiti ndiri Mwanakomana waMwari, kana muchidaidza avo vakavingwa neShoko kuti ‘vamwari’?” Abrahama aionekwa samwari, Eria aive mwari, nekuti Shoko raMwari rakauya kwavari. Nekudaro vaive muzvidimbu, vamwari. Jesu akati vaive. Akati, “Munovaidza ‘vamwari’.”
Zvino, munoona, munhu paakazodzwa saJosefa, akava mufananidzo waKristu, Mosesi paakazodzwa akava mufananidzo waKristu; Davidi paakazodzwa akava mufananidzo waKristu. Vose vachitarisa kuna Kristu, iye ndiye aive kuzara kweShoko. Shoko rakaratidzwa maari. Ndiye aive akazodzwa akazara. Ivo vaive nekuzodzwa kwakapimwa; nesuwo tinako nemupimo. Iye ndiye aive Wakazodzwa akazara. Hurongwa hwaMwari hwese huri maari.
Hama Branham havana kubvira vaita hurongwa hwese. Mwari haana kubvira avaudza pamusoro pehwamanda nomwe kana ndiro nomwe sezvo zviri zvenguva yeKutambudzika kukuru.
63-12-15 NYIKA IRI KUPARARA
PaKisimusi yekutanga iyi, akatumira Shoko mukuzara kwaro, mazviona, Shoko! Chidimbu cheShoko mumuprofita, muprofita aive neMharidzo kunguva iyoyo, akaenda.
Muprofita anenge ari neShoko kunguva yake chete.
63-0804E KUDAIDZA JESU PANZVIMBO
Saka zvakadaro, kuchave neUmwe akazodzwa pamusoro pemaprofita ese; nekuti maprofita ane chidimbu chaMwari, asi iye ane kuzara kwaMwari. Mazviona? Izvozvi, saka munhu anokwanisa kuita chikamu chete. Iye ane kuzara kwese kwehuMwari, pamuviri.
63-0803B PFUMA YAKACHENGETEDZWA
Nekuti, Mwari ari muvatendi sezvaaive muna Kristu. Kwete mukuzara kwake aive muna Kristu, asi ari mauri sezvaaive, nekuti muri vanakomana vaMwari kupfurikidza naJesu Kristu.
Hakuna mutendi anokwanisa kuita kuzara kwaMwari maari.
63-1216 TAKAONA NYEREDZI YAKE TAUYA KUZOMUNAMATA
Mwari, tinonamata kuti huvepo hwenyu huve nesu husiku hwanhasi patinopinda munyaya yeKisimusi.
Zvino, munoona, hatisi vanhu vakapatsanurwa, tinofanira kuva takabatana, nekuti mumwe nemumwe wedu akabata chikamu chaMwari. Tinofanira kuva pamwechete, ipapo Shongwe yeMoto inoratidzwa mukuzara, mukuzara kwayo; kereke yake painogara pamwechete munzvimbo dzeKudenga, ipapo kuzara kwesimba raMwari kunenge kuri muKereke yake. Mumwe nemumwe wedu akabata zvipo zvemweya nemabasa emweya, vari pamwechete, vodzosa zvakara Shongwe iya yeMoto.
57-0308 MUFUDZI WEMAKWAI AKANAKA
HuMwari hwose hwakadururwa munaKristu. Zvose zviri Mwari zvaive zvaive muna Kristu. Zvose zviri Kristu, akazvidurura paKereke yake.
Oh, chiri kudiwa nePentecosti nhasi chidzidzo cheBhaibheri chakanaka, dzidziso yakanaka; ipapo hamuzodi zvizhinji zvinoitika. Mazviona? Jesu Kristu aive Mwanakomana waMwari. Aive neMweya usina mupimo. Munotenda mazviri here? Maari hamuna kungogara chikamu chiduku chaMwari, asi kuzara kwese kwaMwari kwaive muMwanakomana wake Kristu Jesu. Aive kuzara kwehuMwari pamuviri. HuMwari hwese hwaive hwakadururwa munaKristu. Zvose zviri Mwari zvaive muna Kristu. Zvose zviri Kristu, akazvidurura mukereke. Kereke yese pasi rese ine kuzara kweMweya. Hakuna munhu mumwe ane kuzara kwaMwari maari.
57-0804E TICHAKWANISA KUONA JESU
Zvose zvaive Mwari, akazvidurura munaKristu. Kristu aive Mwari airatidzwa panyika. Zvose zvaive Kristu akazvidurura paKereke yake. Uye simba rese rina Mwari rakazorora pana Kristu, uye kuzara kwaKristu kwakazorora paKereke yake. Saka vanofanira kuva vanhu vakadii.
Kuzara kwovuMwari pamuviri kunogara muna Kristu. Mwari aive muna Kristu achiyananisira nyika kwaari. Tingori zvipo zvaMwari kuKereke yake.
Naizvozvo, Mweya waive muna Jesu, waive wakaita semvura yese iri panyika. Uye zvipo zvemweya zvaibva kuna Jesu, zvakafanana nemupimo wemvura iyoyo. Asi mishonga yese iri mugungwa, iri mumupimo wemvura; mushonga mumwechete, asi hausi muzhinji wawo. Isu tinawo nemupimo; Iye anawo usina mupimo.
65-1128M NZVIMBO YAMWARI IMWE YATAKAPIWA YEKUNAMATIRA
Imi sechikamu chembeu yaMwari, chikamu cheShoko, vamwe vanhu chikamu cheShoko raMwari, vagere pamwechete, vachiratidzira muviri wese waKristu, nekuti hamuna mbiriso mukati menyu. (Tarirai kuti ari kutaura nezvei, hama Brown?)Hamuna mbiriso mukati menyu, Shoko rega, vagere munzvimbo dzeKudenga, pamusuwo paanoisa Zita rake; Kristu Jesu. Hapana mbiriso pakati penyu, ndizvo zvinounza kuzara kwese kwehumwari pamuviri pakati penyu. Hazvina kukwanisa kuitika munguva yaLuther, hazvina kukwanisa kuitika munguva yaWesley, hazvina kukwanisa kuitika munguva yePentecosti; asi muzuva richaratidzwa Mwanakomana weMunhu, raachaziviswa, kudzosa kereke pamwechete nekuzara kwehuMwari pakati pevanhu vake, achiratidza zviratidzo zvimwechete zvinoonekwa, achizviratidza sezvaakaita pakutanga paakaratidzwa panyika mumucherechedzo waMwari muprofita. Oh! Kubwinya! Zvakavimbiswa naMaraki 4, zvakavimbiswa neMagwaro ese. Munonamatirepi? Mumba maMwari, makagara (zvaitoitika ipapo).
Kusanganisa zvidimbu zvaMwari zviri mumunhu mumwe nemumwe zvinoburitsa kuzara kwaMwari.
64-0320 MWARI ACHIZVIZIVISA NEHUNHU HWAKE
Muprofita aingova chinhu chiduku. Kristu aive kuzara kwaMwari.
64-0313 IZWI RECHIRATIDZO
Messiasi aive chii? Messiasi raive Shoko, rakazara. Aive kuzara kwaMwari. Muprofita aive chiedza chidudu chaipenya. Asi Maari (Jesu) ndimo maive nechiedza chese, chaive muna Messiasi, nekuti aive Mwari airatidzwa, akaitwa Emanuere, Mwari anesu mumuviri wenyama.
No human being can ever stand in the shoes of Jesus. Hakuna munhu angagone kumira mushangu dzaJesu.
Kufananidza chero munhu naJesu kutambisa nguva kuri pachena.
VAFIRIPI 2:10 Kuti muzita raJesu mabvi ose afugame, avari kudenga navari panyika, nezviri pasi penyika,
William Branham anofanirawo kupfugama mabvi ake kuna Jesu.